Ahene Nhoma a Edi Kan 9:1-28
Yehowa san yii ne ho adi kyerɛɛ Solomon (1-9)
Solomon akyɛde a ɔde maa Ɔhene Hiram (10-14)
Nneɛma akɛse a Solomon yɛe (15-28)
9 Bere a Solomon wiee Yehowa fi ne ahemfi* no+ ne biribiara a ɛda Solomon koma so sɛ ɔbɛyɛ no ara pɛ,+ 2 Yehowa yii ne ho adi kyerɛɛ Solomon ne mprenu so sɛnea oyii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ Gibeon no.+ 3 Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Mate wo mpaebɔ ne w’adesrɛ a wode too m’anim no. Mayɛ ofi a woasi yi kronkron de me din ato so kosi daa;+ mɛma m’ani aku ho na mahwɛ so daa.+ 4 Na wo, sɛ wode koma a edi mu+ som me na woyɛ adetrenee+ te sɛ wo papa Dawid,+ na woyɛ nea maka akyerɛ wo nyinaa,+ na wudi m’ahyɛde ne m’atemmusɛm so a,+ 5 ɛnde me nso mɛma w’ahengua atim Israel so daa sɛnea mehyɛɛ wo papa Dawid bɔ no. Meka kyerɛɛ no sɛ, ‘Daa w’aseni na ɔbɛtena Israel ahengua so.’+ 6 Nanso sɛ wo ne wo mma dan mo akyi kyerɛ me, na moanni me mmara nsɛm ne m’ahyɛde a mede ama mo no so, na mokɔsom anyame foforo na mokotow wɔn a,+ 7 ɛnde me nso asaase a mede ama Israel no, metu wɔn afi so,+ na ofi a mayɛ no kronkron ama me din no, mɛtow afi m’anim akyene,+ na wɔde Israel aka asɛm aserew* adi ho fɛw wɔ aman nyinaa mu.+ 8 Na ofi yi bɛdan amamfo,+ na obiara a obetwam no behu ama ne ho adwiriw no, na wabɔ hwirema aka sɛ, ‘Ɛyɛɛ dɛn na Yehowa yɛɛ asaase yi ne ofi yi sɛɛ?’+ 9 Na wɔbɛka sɛ, ‘Wɔagyaw Yehowa, wɔn Nyankopɔn a oyii wɔn agyanom fii Egypt asaase so no ntia; wɔagyaw no hɔ akodi anyame foforo akyi, na wɔakotow asɔre wɔn. Ɛno nti na Yehowa de amanehunu yi nyinaa aba wɔn so no.’”+ 10 Solomon de mfe 20 na esii afi abien no, Yehowa fi ne ahemfi* no,+ 11 Tiro hene Hiram+ de sida nnua ne ɔpopaw nnua ne sika kɔkɔɔ dodow biara a Solomon pɛ bɛboaa no,+ ɛnna Ɔhene Solomon de nkurow 20 a ɛwɔ Galilea asaase so maa Hiram. 12 Enti Hiram fi Tiro kɔhwɛɛ nkurow a Solomon de maa no no, nanso n’ani annye ho. 13 Ɛnna obisaa no sɛ: “Me nua, nkurow bɛn na wode ama me yi?” Ɛno nti wɔafrɛ hɔ Kabul Asaase* de abesi nnɛ. 14 Hiram soma ma wɔde sika kɔkɔɔ dwetikɛse* 120 kɔmaa ɔhene.+ 15 Apaafo+ a Ɔhene Solomon ma wosii Yehowa fi,+ n’ankasa fi,* Esiw no,*+ Yerusalem fasu, Hasor,+ Megido,+ ne Geser+ no ho nsɛm ni. 16 (Ná Egypt hene Farao akɔ Geser so akɔko agye kurow no de ogya ahyew, na Kaananfo+ a wɔtete kurow no mu nso, na wakunkum wɔn. Enti ɔde kurow no maa ne babea,+ Solomon yere no, de gyaa no kwan.*) 17 Solomon san kyekyee Geser, Anaafo Bet-Horon,*+ 18 Baalat,+ ne Tamar a ɛwɔ sare so wɔ n’asaase so, 19 na Solomon adekora nkurow nyinaa, nteaseɛnam nkurow,+ nkurow a ɔkyekye maa ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so, ne ɔdan biara a Solomon pɛe sɛ osi wɔ Yerusalem, Lebanon, ne nsaase a odi so nyinaa nso, ɔyɛɛ ho adwuma. 20 Nnipa a wɔaka a wofi Amorifo, Hitifo, Perisifo, Hiwifo, ne Yebusifo+ mu a wɔnyɛ Israelfo no,+ 21 wɔn mma a wɔkaa asaase no so a Israelfo antumi ansɛe wɔn no, Solomon de wɔn yɛɛ nkoadwuma, na wɔayɛ nkoa de abesi nnɛ.+ 22 Israelfo de, Solomon amfa obiara anyɛ akoa amma wanyɛ adwuma amma no;+ mmom na wɔyɛ n’asraafo, n’asomfo, ne mpanyimfo, ne wɔn a wɔhwɛ ne nteaseɛnam ne ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so. 23 Ná Solomon wɔ mpanyimfo so akunini 550; wɔn na na wɔdeda adwumayɛfo no ano.+ 24 Farao babea+ no de, ofii Dawid Kurow mu+ kɔɔ ofi a wasi ama no no mu. Ɛno akyi na ɔhene kyekyee Esiw no.*+ 25 Afe biara, na Solomon bɔ afɔre mprɛnsa+ wɔ afɔremuka a osi maa Yehowa no so,+ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre. Afei nso, na ɔhyew afɔrebɔde wɔ afɔremuka a ɛwɔ Yehowa anim no so. Enti owiee ofi no ho adwuma nyinaa.+ 26 Ɔhene Solomon yeyɛɛ ahyɛn pii nso wɔ Esion-Geber.+ Ná ɛhɔ bɛn Elot wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no ano wɔ Edom asaase so.+ 27 Hiram maa ne nkoa a wonim po so adwuma kɔkaa Solomon nkoa ho ne wɔn yɛɛ adwuma;+ wɔrekɔ no, wɔde po so ahyɛn kɔe. 28 Wɔkɔɔ Ofir,+ na wogyee sika kɔkɔɔ dwetikɛse 420 brɛɛ Ɔhene Solomon.
^ Nt., “ayɛ akasabebu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Asaase Hunu.”
^ Anaa “sɛ ayeforo akyɛde; sɛ tiade.”
^ Anaa “hyɛɛ Geser ne Anaafo Bet-Horon den.”